दुर्व्यवहारको डरले लुक्न बाध्य संक्रमित | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार दुर्व्यवहारको डरले लुक्न बाध्य संक्रमित
२०७७, १५ मंसिर सोमबार ०९:१७
पोखरामा परिवारसहित डेरा गरी बस्ने एक युवक कोरोना भाइरस संक्रमण नहोस् भनेर निकै सजग थिए। जति सजगता अपनाए पनि उनलाई कात्तिक अन्तिम साता संक्रमण भइछाड्यो। लक्षण देखिएलगत्तै उनी डेरा छाडेर होटलको आइसोलेसन बसे। संक्रमणले गलाएपछि अस्पताल जानुप९यो। आठ दिनपछि डिस्चार्ज भए पनि उनी डेरा जान सकेनन्। कारण, घरबेटी र छिमेकीको डर। अहिले उनी होटलमै स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका छन्।
रोगले च्यापेर कमजोर बनेका उनलाई परिवारको रेखदेखको खाँचो थियो तर घरबेटीदेखि डराउँदा उनले एक्लिएरै बस्नुप९यो। चिकित्सकले नेगेटिभ रिपोर्ट आइनसके पनि संक्रमण अवधि लामो भइसकेकाले अरूलाई सर्दैन भनेर सुझाउँदा समेत उनी डेरा फर्कन सकेनन्।
‘घरबेटीलाई थाहै नदिई म होटलमा आएर बसें। संक्रमणले च्यापेर आठ दिन अस्पताल बसेर पनि डिस्चार्जपछि डेरा जाने आँट आएको छैन,’ उनले भने। उनको परिवारमा पत्नी, छोरा र छोरी छन् र उनीहरू कसैमा संक्रमण छैन। ‘व्यक्तिगत कामले बाहिर गएको भनेर घरबेटीलाई ढाँटिएको छ,’ उनले भने, ‘कोरोना लुकाउनुहुँदैन भनेर सबैलाई भनिहिँड्ने म आफैंले त्यसलाई लुकाउनुपरेको छ।’
उनले थपे, ‘संक्रमितले घरबेटी, छिमेकी, आफन्तबाट दुव्र्यवहार खेप्नुपरेको घटना हामीले सुनिरहेका छौं। त्यो त्रास मलाई पनि आइप९यो। त्यसैले म खुल्न सकिनँ।’ नदीपुरका सञ्जय मल्ल पत्नीलाई संक्रमण भएपछि आफ्नो परीक्षण गराउन प्रयोगशाला गए।
प्रयोगशालामा रिपोर्ट लिन गएको बेला संयोगवश एक व्यक्तिसँग मल्लको भेट भयो। मास्क लगाएकाले मल्लले ती व्यक्ति को हुन् भनेर ठम्याउन सकेनन तर ती व्यक्तिले मल्लसँग चिनजान भएकाले प्रयोगशाला आउनुको कारण सोधे। मल्लले पिसिआरको रिपोर्ट लिन आएको बताए। ‘श्रीमतीको रिपोर्ट पोजेटिभ थियो। मेरो नेगेटिभ आयो भनेपछि ती व्यक्ति हत्तारिँदै टाढिए,’ मल्लले भने, ‘म त संक्रमित थिइनँ तर उनले मलाई नै संक्रमित ठाने र तत्कार भागे। अघि नै भन्नुपर्दैनथ्यो भन्दै गुनासो पनि गरे।’ यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
Previous articleविहान उठेर के गर्ने ? के नगर्ने ?
Next articleआज गुरु नानक जयन्ती, विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै